Iron oxide nemibala, Umbala Brick Pigment, Iron oxide Color - Huamei
Iron oxide obomvu uchungechunge
Iron oxide ophuzi uchungechunge
Composite uchungechunge okwesibhakabhaka
Iron oxide uchungechunge oluhlaza
Special uhlelo toner lombala umgwaqo
Special uhlelo toner lombala asphalt
umbala okubalulekile phansi
Ultrafine futhi abahlakazekile bengaba yensimbi oxide
toner okubalulekile Tile umbala phansi
Umbala zombala yezinto zokwakha
Iron oxide sombala nge lokushisa ukumelana okuphezulu
ebusweni Architectural enamathela zokuhlobisa amanzi
imikhiqizo yenkampani kabanzi asphalt imigwaqo umbala, ukhonkolo ezinemibala imigwaqo permeable, flooring, upende, tile phansi, uyinki, upende, izinto ezenziwe ngobumba, umbala iphepha kanye nezinye izimboni. Kukhona cishe 30 izinhlobonhlobo yensimbi oxide obomvu, yensimbi oxide ophuzi, esiyinhlanganisela okwesibhakabhaka, phansi oluhlaza, yensimbi oxide abamnyama, yensimbi oxide ensundu, peach obucayi, nokunye.
Le nkampani ine lweminyaka engu-30 yomlando ekukhiqizeni yensimbi oxide zombala futhi production ecebile isipiliyoni kanye namakhono ucwaningo. Lo mbala umbala umgandayo ubamukela eziphambili ukukhiqizwa ubuchwepheshe kanye nemishini ukukhiqiza, isakhiwo ngokwesayensi futhi okwakha, kanye ezingeni jikelele usesimweni okuholela ukuthi imboni yasekhaya. Kuyinto ibhizinisi ukuboniswa yensimbi oxide umkhakha China.
Le nkampani ine iqembu lokhonako eziphambili nokukhiqizwa nokuqhutshwa imishini, avuthiwe ukukhiqizwa ubuchwepheshe kanye ephelele emva-sales service. Izinkomba lobuchwepheshe imikhiqizo yayo Usufike futhi idlule amazinga kazwelonke, futhi athengiswe kahle ezweni lonke futhi kahle ngabasebenzisi.
Henan Huamei Chengde Pigment Co., Ltd. ikakhulu ukhiqiza yensimbi oxide zombala, basuke kabanzi umbala asphalt imigwaqo, ezinemibala ukhonkolo imigwaqo permeable, flooring, upende, tile phansi, uyinki, upende, izinto ezenziwe ngobumba, umbala iphepha kanye nezinye izimboni. Kukhona cishe 30 izinhlobonhlobo obomvu, ophuzi, oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza, omnyama, onsundu, onsomi, orange, grey, peach obucayi, nokunye. Kusukela yasungulwa, inkampani isungule ephelele isampula kuhlolwa futhi izibonelo zalokho, isampula izinqubo zokulondoloza, ukulawula ephumelelayo isampula ukuhlaziywa kanye umkhiqizo mpahla kokulandela ngokuhambisana ngokuqinile ISO9001 ngamazwe ukuphathwa izinga uhlelo kanye ISO14001 ngamazwe ukuphathwa kwemvelo uhlelo amazinga. Lezi kungaba Nikeza wena nge esitebeleni izinga okusezingeni eliphezulu imikhiqizo sombala.
ferric oxide ophuzi
(Ngenxa yokuthi izimo yokusetshenziswa langempela kukhona beyon ...
ferric oxide obomvu
ensimbi amnyama oxide
ukusebenza yomkhiqizo: ngokomzimba kungemalengiso ...
Indawo eseningizimu-mpumalanga ye empambana Louli xian futhi xian Zhaoyan e Huojia ezweni, Xinxiang, Isifundazwe Henan
Amathiphu - Imikhiqizo Zezıhlabane - Ibalazwe - AMP Hambayo © Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved.
Hot Yamadivayisi Paint Pigment Powder Iron oxide Yellow, Iron oxide Red Ukuze esinemthombo , Iron oxide Pigment Red Black Brown Futhi Yellow Color, Iron oxide Red 130 , Red Iron oxide Black, Iron oxide Red Factory Amanani ,